Fanamboarana kilalao voaverina: Ny sodina majika! | Asa tanana
Dunya Santiago | | asa-tanana, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Ny iray amin'ireo zavatra tena tian'ny zanatsika dia ireo rehetra ireo juguetes misy mozika. Eny, tsy voatery ho kilalao lafo vidy ao anatiny izany, aleo tadidintsika fa indraindray ny zavatra tsotra sy mora indrindra atao dia ireo izay tian'ny zanatsika indrindra ary mampiala voly ny zanatsika rehefa kilalao novidiana novidiana indray mandeha dia arosony avy eo amin'izy ireo ao amin'ny tratran'ny kilalao.
Amin'ity tranga ity dia afaka manao flute isika amin'ny zavatra tsotra toy ny mololo, mololo, bararata na izay tiantsika hiantsoana azy ireo. Amidy amin'ny fivarotana lehibe rehetra izy ireo. Mila araka izay itiavanao ny sodina ianao, izany hoe azonao atao amin'ny mololo efatra na amin'ny roa ambin'ny folo.
Ankoatry ny mololo dia mila kasety kely na kasety koa ianao. Safidy iray hafa ny lakaoly, fa raha afaka misafidy kasety ianao dia anolorako azy satria ho tsara kokoa io, mora kokoa ny manao azy ary azo antoka kokoa aza. Araka ny hitanao dia mila zavatra roa fotsiny isika ary izao andao hanao ny sodina!
Mora toy ny mandray ny mololo sy manapaka tsirairay kely kokoa noho ny teo aloha, azontsika atao ny mampiasa mpanapaka handrefesana azy. Hanohy hanapaka mololo izahay mandra-pahatongantsika vitsivitsy amin'izy ireo (araka ny efa nolazainay teo aloha, araka izay ilainao).
Taty aoriana dia nametraka sosona kasety na kasety izahay, nametraka tamim-pitandremana ireo mololo, ary fonosina amin'ny kasety mba hiraikitra. Tsotra sy mahafinaritra izany!
Fanazavana fanampiny - Asa-tanana ho an'ny ankizy: Ny oroka manidina
Sary - snsk24
Loharano - snsk24
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa-tanana ho an'ny ankizy » Kilalao voaverina: Ny sodina majika!
leiza dia hoy izy:
Inona no mahagaga ny manualidaes, mahaliana ny mahita ny habetsaky ny zavatra azo atao amin'ny tombom-barotra
Mamaly an'i leiza